စကားစု Daniel Lacalle: သူ၏အကောင်းဆုံးစကားစု ၃၅ လုံးနှင့်သူသည်ဘယ်သူလဲ စီးပွားရေးဘဏ္ာရေး
Claudi casals | 29/07/2021 09:00 | အထွေထွေစီးပွားရေး
ထိပ်တန်းစီးပွားရေးပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်ရန်နှင့်သင်၏ပညာကိုလက်ဆင့်ကမ်းရန် Wall Street တွင်သင်နေထိုင်စရာမလိုပါ။ ဒါကို Daniel Lacalle ၏စာပိုဒ်များဖြင့်သရုပ်ဖော်သည်။ မက်ဒရစ်စီးပွားရေးပညာရှင်တစ် ဦး ကစီးပွားရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကိုကာကွယ်ပေးခဲ့သည်။ သူသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး မဟုတ်သော်လည်းသူသည်သူ့ကိုကဏ္inတွင်ကျွမ်းကျင်မှုအပြည့်အဝရှိသောလေ့လာမှုများနှင့်အတွေ့အကြုံများလုံလောက်သည်။
ဒီဆောင်းပါးမှာ Daniel Lacalle ရဲ့အကောင်းဆုံးစကားစု ၃၅ ခုကိုစာရင်းပြုစုထားပြီးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗဟုသုတကြွယ်ဝစေဖို့သူရဲ့အတ္ထုပ္ပတ္တိအကြောင်းပြောဆိုသွားမှာပါ။
1 Daniel Lacalle ၏အကောင်းဆုံးစကားစု ၃၅ ပုဒ်
2 Daniel Lacalle ကဘယ်သူလဲ
2.1 Daniel Lacalle ဘယ်မှာအလုပ်လုပ်လဲ။
2.2 Daniel Lacalle ဘာတွေလေ့လာခဲ့လဲ။
Daniel Lacalle ၏အကောင်းဆုံးစကားစု ၃၅ ပုဒ်
အမှားလုပ်မိခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုအသစ်အသစ်တွေရှာဖွေခြင်းတို့ဖြင့်အများကြီးသင်ယူရမယ်ဆိုတာရှင်းပါတယ်။ သို့သော် Daniel Lacalle ၏စကားများအပြင်ကျော်ကြားသောစီးပွားရေးပညာရှင်များစွာ၏စကားစုများ၊ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုနည်းနည်းလောက်လမ်းညွှန်ပေးနိုင်ပြီးကမ္ဘာကြီးကစီးပွားရေးအရဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုကောင်းကောင်းနားလည်အောင်ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ဤအကြောင်းကြောင့် Daniel Lacalle ၏အကောင်းဆုံးစာပိုဒ် ၃၅ ပုဒ်ကိုအောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တင်ပြလိမ့်မည်။
“ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ကြီးရှုံးနိမ့်ရခြင်းအကြောင်းအရင်းသည်ရိုးရှင်းပါသည်၊ ၎င်းကိုပြုလုပ်သောသူတို့သည်အကျိုးမခံစားရသူများဖြစ်သည်။ ကြိုးစားအားထုတ်သူများအတွက်မက်လုံးမရှိ၊ အလုပ်နှင့်တာဝန်ယူမှုကိုရှောင်ကြဉ်သူများအတွက်ဆုလာဘ်များရှိသည်။ အများစုကိုတွန်းချသကဲ့သို့, Excellence ဆုလာဘ်မဟုတ်ပါဘူး, ကအောင်မြင်ဘယ်တော့မှ။ "
“ လူတစ် ဦး ချင်းစီ၏လွတ်လပ်ခွင့်ကိုအားပေးခြင်းသည်လူမှုရေးနှင့်တရားမျှတခြင်းထက်လူထုအကျိုးအတွက်မျက်နှာသာရရန်ကြိုးစားခြင်းထက်လူမှုရေးနှင့်တရားမျှတမှုပိုရှိသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတစ် ဦး တစ်ယောက်ဟာစည်းစိမ်ဥစ္စာကိုစီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်နဲ့ပြန်လည်ဝေငှတဲ့မတော်မတရားပြုမူတဲ့ပြည်နယ်ထက်ပိုပြီးကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးရက်ရောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။
“ လျှပ်စစ်သို့မဟုတ်သဘာဝဓာတ်ငွေ့သုံးကားများသည်ရေနံမှဆင်းသက်လာသူများထံမှစျေးကွက်ဝေစုကိုရယူလျှင်ဘာဖြစ်မည်နည်း။ စားသုံးသောအစိုးရများသည်ဆုံးရှုံးသွားသောအခွန်များကိုလျှပ်စစ်နှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့အပေါ်အခြားအခွန်များဖြင့်အစားထိုးရန်နည်းလမ်းများရှာဖွေမည်မှာသေချာသည်။ "
“ တိတ်တိတ်ပုန်းမကြိုက်ဘူး။ ခြိုးခြံခြွေတာနာတယ် ဒါပေမယ့်ဒေဝါလီခံခြင်းကလူတွေကိုပိုပြီးနှောင့်ယှက်စေပြီးများစွာသောလူများစွာအတွက်ပါ။
"ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုစနစ်များကိုဆင်းရဲသောသူကိုအမြဲစဉ်းစား။ အဲဒါကြောင့်သူတို့ကနှစ်စဉ်သန်းပေါင်းများစွာကိုဖန်တီးနေတာပါ။ "
“ စပိန်ကကြွေးမြီတွေကိုထိန်းချုပ်ထားတယ်ပြောတယ်။ Lindsay Lohan ကသူမအစွဲမထားပါဘူးလို့ပြောတယ်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ် ဦး အနေနှင့်အကောင်းမြင်လွန်းသောခန့်မှန်းချက်များပေးနိုင်ရန်ပညာရှင်အဆင့်တွင်ကုမ္ပဏီအမှုဆောင်များ၊ အေဂျင်စီလေ့လာသုံးသပ်သူများနှင့်ပွဲစားများမည်သူမျှမသိရပါ။
"စွမ်းအင်စျေးပေါပေါများခြင်းနှင့်တတ်နိုင်ဖြစ်ရမည်။ ကုန်ကျစရိတ်၊ ရရှိနိုင်မှုနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်သိုလှောင်ရလွယ်ကူမှု။ ကျန်တာအားလုံးကပုံပြင်တွေဘဲ။ "
“ ဒီလုပ်ငန်းကဘယ်သူကမှသူလုပ်နေတဲ့အရာကိုလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့လွဲမှားတဲ့ယုံကြည်ချက်ကနေရင်းနှီးမြှုပ်နှံတယ်။ ”
“ တစ်ခုရှင်းရှင်းပြောရရင်ဒါကနောက်ဆုံးရေနံတစ်စည်ဟာဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာတန်ဖိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ သုညနဲ့တန်လိမ့်မယ်။ "
ဒီပြcrisisနာကကွာရှင်းတာထက်အများကြီးပိုဆိုးတယ်၊ ငါပိုက်ဆံတစ်ဝက်လောက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်တုန်းပဲ။
“ အမြတ်အစွန်း၊ အမြတ်အစွန်းနဲ့အမြတ်အစွန်း။ ဒါတွေကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ငါ့ရဲ့မဟာဗျူဟာရဲ့မဏ္ိုင်သုံးရပ်ပဲ။ "
“ အကြွေးတွေကမဆိုးပါဘူး။ ပြန်လည်ပေးဆပ်မှုမရှိလျှင်အကြွေးသည်ဆိုးသည်။ "
"သူတို့ကဘယ်သူကိုပိုယုံကြည်လဲ၊ သူတို့ရဲ့ငွေတွေကိုလောင်းကစားလုပ်ပြီးအမှန်တရားကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတဲ့သူ၊ အဲဒါကိုဖုံးကွယ်ဖို့၊ မဲပေါက်တဲ့သူ၊ အဲဒါကိုဘယ်သူပိုယုံကြည်လဲ။ "
“ ကမ္ဘာပေါ်ရှိစည်းမျဉ်းအားလုံးသည်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အသိဥာဏ်ကိုထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ မင်းကိုယ့်ကိုကိုယ်အသိပေးဖို့၊ သင်ယူရမယ်။ ၎င်းသည်ဖျော်ဖြေမှုမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့တစ်ချိန်ချိန်မှာမှားလိမ့်မယ်။ "
“ အကြွေးတွေကမူးယစ်ဆေးဝါးတစ်မျိုး၊ စာအုပ်တစ်အုပ်လုံးကိုငါထပ်ပြောနေခဲ့တယ်။ ၎င်းသည်တန်ဖိုးထားမှုသမ္မာသတိကိုဖုံးလွှမ်းစေသည်၊ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အားကောင်းစေသည်၊ အားကောင်းစေသည်၊ ၎င်းကိုပန်းရောင်အရောင်နှင့်လက်ရှိကိုပိုမိုမြင်သာစေသည်။ မူးယစ်ဆေးကဲ့သို့အကြွေးသည်ကျွန်စနစ်မှအပအခြားမရှိသောကြောင့်၎င်းသည်လှည့်စားခြင်းဖြစ်သည်။ ”
“ ဒီကနေ့မှာစီးပွားရေးအတွေးအခေါ်တွေရှိနေတယ်။ ဒီအရနိုင်ငံတော်ကစီးပွားရေးဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုသဘောသဘာဝအရကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆုံးဖြတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမှားတွေကိုခွင့်လွှတ်ရမယ်။ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်သူတွေကမင်းအချုပ်အနှောင်ခံရတာကိုမျှော်လင့်တယ်၊ မင်းကတခြားဖြေရှင်းချက်ကိုမတွေ့ဘူး၊ အစိုးရတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုလက်မြှောက်ဖို့ကလွဲလို့တခြားနည်းလမ်းမရှိဘူးလို့မင်းလက်ခံတယ်။
“ သတင်းအမှားတွေကစျေးကွက်တွေကိုသတိရရုံပဲ။ အဘယ်ကြောင့်? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့ဟာအတွေးအခေါ်ကြောင့်ဘဏ္ideာရေးကုန်သွယ်မှုကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတဲ့စီးပွားရေးမှာရှိနေတယ်။ "
"ဘဏ္cultureာရေးယဉ်ကျေးမှုမရှိပါက, ပရိယာယ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ ယေဘူယျအားဖြင့်အများပြည်သူတို့သည်ငွေကြေးယဉ်ကျေးမှုကိုဆည်းပူးရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ "ကျွန်တော်ကိုအကြံပေးခဲ့ပါတယ်" လို့ညည်းတွားမြည်တမ်းနေတာဟာဝမ်းနည်းစရာကောင်းပေမယ့်အဝိဇ္ဇာအတွက်အကောင်းဆုံးကုသနည်းကတော့သတင်းအချက်အလက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့်သင်ယူခြင်းနှင့်အမှားများကိုစျေးကွက်များ၌မထားဘူးဆိုတာသူတို့သိပြီး၊ သူတို့ထင်သလောက်နည်းနည်းမျှသာစိတ်ကူးနိုင်သူသို့မဟုတ်သူတို့နှစ်များတစ်လျှောက်သက်တမ်းတစ်လျှောက်ထပ်ခါတလဲလဲယုံကြည်မှုများကြောင့်သူတို့ကိုယ်သူတို့သယ်ဆောင်သွားရန်ခွင့်ပြုသည်။
“ စီးပွားရေးလွတ်လပ်ခွင့်ဟာအခြားမူဝါဒတွေထက်ဆင်းရဲမွဲတေမှုကိုလျှော့ချဖို့ပိုလုပ်ခဲ့တယ်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင်စုပေါင်းဝါဒဖြန့်ကျက်မှု၏ပြသနာကတစ် ဦး တည်းသုံးစွဲခြင်းသည်ဒေဝါလီခံခြင်းသာဖြစ်သည်ဟုသက်သေပြခဲ့သည်။
“ ငါဆွီဒင်ကိုချစ်တယ်။ ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးဆွီဒင်ကဲ့သို့ဖြစ်သင့်သည်။ သူတို့သည်အရက်သောက်ခြင်း၊ အဝတ်အစားချွတ်ခြင်းကိုနှစ်သက်ပြီးလူများသည်အလွန်လှသည်။ ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်ကလူကောင်းတစ်ယောက်ဆိုတာငါမစဉ်းစားနိုင်ဘူး။ "
"မင်းလုပ်ချင်တာကိုလုပ်ပါ၊ ဒါပေမယ့်တာဝန်အပြည့်နဲ့လုပ်ပါ။ "
"တစ် ဦး ချင်းစီအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားမည်သူမဆိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပညာရှိနှင့်အလယ်အလတ်ဖြစ်၏ သူကလူအုပ်ထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်ရင်သူကချက်ချင်းအကောင်လိုက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ "
“ သူတို့ကငါတို့ကိုထပ်ခါတလဲလဲအဆိုပြုတဲ့ပဉ္စလက်ဖြေရှင်းချက်တွေကအမြဲတမ်းလိုလိုပါပဲ၊ တန်ဖိုးကျဆင်းခြင်း၊ ငွေရိုက်ထုတ်ခြင်းနှင့်အကြွေးသက်သာစေခြင်း။ ဆင်းရဲပြီးကျွန်ဖြစ်တာ "
"ကန့်သတ်ချက်မှချွေတာသူငါ့အဖိုး, အမြဲပြောခဲ့သည်: ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူသတိထားပါ, သင်ကရန်အသုံးပြုရ။ "
Daniel Lacalle ကဘယ်သူလဲ
၁၉၆၇ မှာငါတို့ရဲ့ဇာတ်လိုက်မင်းသားကို Daniel Lacalle ကမွေးဖွားခဲ့တယ်။ ဤစပိန်စီးပွားရေးပညာရှင်သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်အစုစုနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံခန့်ခွဲမှု၌သူ၏အလုပ်အကိုင်ကိုစတင်ခဲ့သည်။ သူကအင်္ဂလန်၊ အထူးသဖြင့်လန်ဒန်မှာ အကျိုးတူအရင်းအနှီး၊ ကုန်ကြမ်းများနှင့်အပြောင်းအလဲနှင့်ပုံသေ ၀ င်ငွေတို့ကိုလွှမ်းခြုံသည်။ ၎င်းသည် Thomson Reuters အဆင့်ရှိသော Extel Survey ၏အကောင်းဆုံးမန်နေဂျာသုံး ဦး တွင် ၅ နှစ်ဆက်တိုက်မဲမပေးလိုကြောင်းသတိပြုသင့်သည်။ ထိုနေရာတွင်သူသည်လျှပ်စစ်၊ အထွေထွေမဟာဗျူဟာနှင့်ရေနံတို့ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် Daniel Lacalle ၏စကားစုများသည်အရေးကြီးသောနောက်ခံဗဟုသုတနှင့်အတွေ့အကြုံများရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယူဆနိုင်သည်။
စပိန်အတွက်၊ ဤတွင်၎င်းသည်မီဒီယာအသီးသီးတွင်ရှိနေခြင်းကြောင့်လူသိများသည်။ ၎င်းတို့တွင်သူသည်စီးပွားရေးလစ်ဘရယ်ဝါဒကိုအကြိမ်ကြိမ်ကာကွယ်ခဲ့သည်။ သူ့အပြောအရစီးပွားရေးလွတ်လပ်ခွင့်ရရှိရန်ပြည်သူ့အသုံးစရိတ်များလျှော့ချရန်၊ မဟာဗျူဟာကဏ္sectorsများကိုပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ရန်နှင့်နိုင်ငံတော်၏အာဏာကိုလျှော့ချရန်လိုအပ်သည်။ စီးပွားရေးအဆင့်တွင်ဝေဖန်သူများသည် Daniel Lacalle ကို“ neoliberal” နှင့်“ ultra-liberal” ဟုခဏခဏရည်ညွှန်းကြသည်။
သူ့နာမည်ကငါတို့ကိုအသံထွက်စေတဲ့နောက်ထပ်အကြောင်းအရင်းကနိုင်ငံရေးလောကမှာသူရှိနေခြင်းကြောင့်ပါ။ သူသည် PP ကိုဥက္ကpres္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားသည့်ပါပလောကာဆိုဒို၏စီးပွားရေးကိစ္စကိုအကြံပေးသူဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် Daniel Lacalle သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်ဧပြီလတွင်ကျင်းပခဲ့သောအောက်လွှတ်တော်အမတ်များရွေးကောက်ပွဲသို့ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက် PP စာရင်း၏စတုတ္ထနေရာတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ ဆိုလိုတာကသူကသူ့ထိုင်ခုံနှုတ်ထွက်ဆိုလိုသည်။ သူ့အပြောအရ၊ သူသည်အတော်အတန်စဉ်းစားပြီးမှဤအတိုင်းလုပ်ခဲ့သည်။
ဒီစီးပွားရေးပညာရှင်ကိုလည်းလူသိများသည် စီးပွားရေးစာအုပ်များစွာရေးသားရန်၊ Daniel Lacalle ၏စကားစုများထက်ထင်မြင်ချက်များ၊ ဝေဖန်ချက်များနှင့်အကြံဥာဏ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုတွေ့နိုင်သည်။ ဤတွင်သူ၏ကျမ်းစာအုပ်များ၏စာရင်းဖြစ်သည်။
« La Gran Trampa » (Jorge Paredes နှင့်အတူ)
"ဒံယေလ Lacalle ၏ Blackboard"
စီးပွားရေးနှင့်ဆိုင်သောဤစာအုပ်များအပြင် Daniel Lacalle သည်လည်း နေ့စဉ်အတွက်ကော်လံရေးသားခဲ့သည် အယ်လ် Confidencial. ထို့အပြင်သူသည်အများအားဖြင့်အခြားမီဒီယာများနှင့်ပူးပေါင်းလေ့ရှိသည် 13TV, အ ဘီဘီစီ, အ CNBC, အယ်လ် Mundo, ပြည်သူပိုင်လုပ်ထားသည်, စီးပွားရေး, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု, la Razón, la Sexta, မှတ်ချက်ပေးသူ y The Wall Street ဂျာနယ်.
Daniel Lacalle ဘယ်မှာအလုပ်လုပ်လဲ။
ငါတို့အရင်ပြောခဲ့သလိုဘဲ Daniel Lacalle ရဲ့စကားစုတွေကဘာကြောင့်အသုံးဝင်နိုင်လဲဆိုတာကိုရှင်းပြတာ၊ ဒီ Madrilenian ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေရဲ့စီးပွားရေးပညာရှင်နဲ့စီမံခန့်ခွဲသူတစ်ယောက်ပါ။ သူသည်လက်ရှိတွင်အလုပ်လုပ်သည် Tressis မှာစီးပွားရေးပညာရှင်ချုပ်။ ထို့အပြင်သူသည် IEB နှင့် IE Business School တွင်ပါမောက္ခအဖြစ်အလုပ်လုပ်သည်။
Daniel Lacalle ဘာတွေလေ့လာခဲ့လဲ။
လူအတော်များများကဒီလူဘာကိုလေ့လာခဲ့လဲဆိုတာအံ့သြလိမ့်မယ်။ ကောင်းပြီ၊ Daniel Lacalle ရဲ့စကားစုတွေကိုပိုတန်ဖိုးထားတာကငါတို့ကသူ့ရဲ့ပညာရေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုမီးမောင်းထိုးပြရမယ်။ သူသည်သူ့ဘ ၀ တစ်လျှောက်တွင်ခေါင်းစဉ်များစွာကိုအောင်မြင်ခဲ့သည်။
CIIA (Certified International Investment Analyst) သည်နိုင်ငံတကာဘဏ္analyာရေးလေ့လာသုံးသပ်သူဖြစ်သည်
IESE (Navarra တက္ကသိုလ်) မှဘွဲ့လွန် (PDD)
ဒါကိုငါတို့ကဒီစီးပွားရေးပညာရှင်ကြီးရဲ့အချက်အလက်တွေကိုကောက်ချက်ချတယ်။ Daniel Lacalle ရဲ့စကားစုတွေကမင်းကိုလှုံ့ဆော်ပေးလိမ့်မယ်လို့ငါမျှော်လင့်ပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စီးပွားရေးဘဏ္Financeာရေး » အထွေထွေစီးပွားရေး » ဒံယလေသ Lacalle ကိုးကား